ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့ ကလေးလေးနဲ့ စည်ဖြိုးရဲ့ အကျင့်တွေက အခုထဲက တစ်ပုံစံထဲ တူနေတယ်ဆိုတဲ့ ခင်လွှမ်း – Suehninsi
ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့ ကလေးလေးနဲ့ စည်ဖြိုးရဲ့ အကျင့်တွေက အခုထဲက တစ်ပုံစံထဲ တူနေတယ်ဆိုတဲ့ ခင်လွှမ်း
သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ နှစ်ယောက်ကတော့မကြာသေးခင်အချိန်က ရွှေလက်တွဲခဲ့ကြတဲ့ နေနဲ့လရွှေနဲ့မြစုံတွဲလေးပါ။ လက်ရှိမှာတော့ ခင်လွှမ်းမှာ ရင်သွေးရတနာလေးကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပြီး မကြာခင်အချိန်မှာ ရင်သွေးရတနာလေးကို မွေးဖွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လွှမ်းကတော့
ဗိုက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ရင်သွေးလေးက ဖခင်ဖြစ်သူ စည်ဖြိုးနဲ့အကျင့်တွေတူနေတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ “ဗိုက်ထဲမှာထဲက ဖအေ အကျင့်တေပြနေပြီ။ ည မအိပ်ခင် ဘာမှမစားတတ်တဲ့ကျွန်မ ခုဆို ည မအိပ်ခင် တစ်ခုခု စားလိုက်ရမှ. သူ့ဖအေပါ စားတာနော်။ သန်းခေါင်ဆို
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်တတ်တဲ့ ကျွန်မ ခုဆို ထထပြီး တစ်ခုခု စားနေရပြီ. သူ့ဖအေပါ ထစားတာနော်။ အချိုဆို လုံးဝ မကြိုက်တဲ့ကျွန်မ ခုဆို ချိုမှ စားချင်တာ လုံးဝ သူ့ဖအေ အကျင့်တွေ ” ဆိုပြီး ဗိုက်ထဲက ကလေးလေးကြောင့် သူပါပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုမျှဝေဖော်ပြလာခဲ့တာပါ။ စည်ဖြိုးတို့စုံတွဲလေးကို
ချစ်ခင်ပြီး အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ စည်ဖြိုးနဲ့တူတဲ့ သားချောလေးဖြစ်မှာလို့ မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ အဖေလည်းချော အမေလည်း ချောတဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်းတို့စုံတွဲလေးကရဲ့ ရင်သွေးလေးကတော့ ချောမှာအသေအချာပါပဲနော်။
သရုပျဆောငျ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ နှဈယောကျကတော့မကွာသေးခငျအခြိနျက ရှလေကျတှဲခဲ့ကွတဲ့ နနေဲ့လရှနေဲ့မွစုံတှဲလေးပါ။ လကျရှိမှာတော့ ခငျလှမျးမှာ ရငျသှေးရတနာလေးကို ကိုယျဝနျလှယျထားရပွီး မကွာခငျအခြိနျမှာ ရငျသှေးရတနာလေးကို မှေးဖှားတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ ခငျလှမျးကတော့
ဗိုကျထဲမှာ ရှိတဲ့ ရငျသှေးလေးက ဖခငျဖွဈသူ စညျဖွိုးနဲ့အကငျြ့တှတေူနတေဲ့အကွောငျးကို အခုလိုပဲမြှဝလောခဲ့ပါတယျ။ “ဗိုကျထဲမှာထဲက ဖအေ အကငျြ့တပွေနပွေီ။ ည မအိပျခငျ ဘာမှမစားတတျတဲ့ကြှနျမ ခုဆို ည မအိပျခငျ တဈခုခု စားလိုကျရမှ. သူ့ဖအပေါ စားတာနျော။ သနျးခေါငျဆို
နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျတတျတဲ့ ကြှနျမ ခုဆို ထထပွီး တဈခုခု စားနရေပွီ. သူ့ဖအပေါ ထစားတာနျော။ အခြိုဆို လုံးဝ မကွိုကျတဲ့ကြှနျမ ခုဆို ခြိုမှ စားခငျြတာ လုံးဝ သူ့ဖအေ အကငျြ့တှေ ” ဆိုပွီး ဗိုကျထဲက ကလေးလေးကွောငျ့ သူပါပွောငျးလဲနတေဲ့အကွောငျးတှကေိုမြှဝဖေျောပွလာခဲ့တာပါ။ စညျဖွိုးတို့စုံတှဲလေးကို
ခဈြခငျပွီး အားပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ စညျဖွိုးနဲ့တူတဲ့ သားခြောလေးဖွဈမှာလို့ မှတျခကျြပေးပွောဆိုနခေဲ့ကွပါသေးတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ အဖလေညျးခြော အမလေညျး ခြောတဲ့ စညျဖွိုးနဲ့ခငျလှမျးတို့စုံတှဲလေးကရဲ့ ရငျသှေးလေးကတော့ ခြောမှာအသအေခြာပါပဲနျော။
Source : Khin Hlwan’s Facebook
တစ်ဦးထဲသော ညီမလေးအတွက် အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ သူရိယ